Usizo lwabenza imisenenzi Ukwakha Metal Isitoreji Izinsiza kusebenza Metal Isitsha,Inqola,Pallet,Rack,Roll Isitsha Etc - Foshan Yougu Isitoreji Izinsiza kusebenza Co., Ltd
UFoshan Yougu Isitoreji Sokusebenza Co, Ltd ezikhethekile ekwakhiweni nasekukhiqizeni zonke izinhlobo zesitsha sokugcina impahla sensimbi,yezinyoni, Pallet, Inqola, emakhiyubhi yokubeka,Pallet njll okuyinto nhlobo isitoreji isixazululo umhlinzeki. Ngokuhamba 7000 indawo yokusebenzela yemishini eyisikwele 56 setha izinhlobo zemishini.ngenani 89 izisebenzi eziqeqeshiwe nethimba lonjiniyela, Ithimba le-QC nezinye izinto zehhovisi .
Sadlula i-ISO9001-2000 phakathi 2016 nokusekelwa okungaphezulu 500 amakhasimende.nesithunzi esiphakeme kuHonda, IToyota, Volkswage ,Midea, Gree, I-TCL,Galanz,Coca Cola,JD,DHL and others Yougu provides factory directly competitive price and high quality products for customers ,ekhethekile ekwakhiweni futhi eyenziwe ngezifiso ngokwesicelo sakho noma ukusetshenziswa .
Ngokuhamba 15 iminyaka rich rich engineer ithimba kanye nabasebenzi.Izisombululo eziphelele ngokusho kokusetshenziswa kwamakhasimende.Ukuqanjwa Kokusekela nokwesekwa komdwebo.
Uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi oluqinile ukuze uqinisekise ukuthi wonke umkhiqizo ungahlangana nesicelo samakhasimende,ISO
Ukusekelwa namakhasimende amaningi adumile afana nePeugeot, IToyota ,Huawei njll., Ngokuqondile imboni gcina inani lokuncintisana.
Yenza ngokwezifiso ipallet rack wire decking pallet yezimboni rack iron pallet rack
Ama-rack task pallet racks agcinwayo okuhlala epallet ama-rack ajikelezisa ama-racks
Ibha yensimbi ye-barrel ye-iron barack
Metal pallet racking ngqo intengo efektri
ukwenziwa kweziqukathi ezinkulu zokugcina
Izici ezinhle zekheji yensimbi evaliwe
Imboni yezimoto ezenzakalelayo igcina isitaki samalambu sensimbi
Hot idiphu metal lashukumisa isitoreji iKhabhinethi